एसएसपी खरेलको कनेक्सन कहाँसम्म ? | abc.com.np
जबकी खरेल उक्त प्रकरणमा छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएका छन् । उक्त रात्रीभोज किन र के लागि आयोजना गरिएको थियो ? प्रष्ट हुन नसके पनि एसएसपी खरेल जस्ता सेलिब्रेटी प्रहरी कुन उदेश्यका लागि त्यहाँ पुगे ? चासोको विषय बनेको छ । आफु मात्रै प्रहरीमा स्वच्छ छवि भएको दावी गर्दै आएका खरेल डलर र सुन तस्करीका बादशाह मानिने दिपक मल्होत्रा, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग निकट सम्वन्ध रहेको भनिएका अम्रेशकुमार सिंह, विवादास्पद डीआईजी शर्मा, भारतीय पूर्व डीआईजी समीर इम्लीसँग भोज र बार्तामा मस्त हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । भोजमा खरेलको सहभागिताले उनको स्वच्च छवि आफै उदाङ्गिएको छ । भोजको निम्तो नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई समेत रहेछ । आईजीपी अर्याल, डीआईजी शर्मा, भारतीय डीआईजी इम्ली, अम्रेश सिंह र मल्होत्रासँगै एसएसपी खरेल किन बसे ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार एसएसपी खरेललाई कारवाहीबाट जोगाउन रात्रीभोजको आयोजना गरिएको थियो । आफुलाई नेपाली काँग्रेसका युवा नेता भन्न रुचाउने सभासद् अम्रेशकुमार सिंहले सो भोजको आयोजना गरेका थिए । भारतीय प्रहरीका पूर्व डीआईजी इम्ली र ‘रअ’सँग निकट मानिएका सिंहसँग बसेर भोज र बार्ता गरेपछि स्वच्छ छवि भएका भनिएका खरलमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।
अर्कोतिर छानविनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी डीआईजी शर्मा र एसएसपी खरेल एउटै भोजमा सँगै बस्नु कतिको जाहेज हुन्छ ? कानूनत छानविन चलिरहेका बेला सामान्य भेटघाटलाई समेत असामान्य मानिन्छ । त्यसो त, सिंहको निवासमा भएको भोजमा आईजीपी अर्यालको स्वयम् उपस्थिति थियो । शनिबार बेलुका भएको भोजमा ८.३० बजेतिर सिंह निवास भैसेपाटीमा आईजीजी अर्याल पुगको थिए । स्रोतका अनुसार सिंहको निवासमा एसएसपी खरेल र डीआईजी शर्मा पहिलेदेखि तस्करीका बादशाह मल्होत्रा र भारतीय प्रहरीका पूर्व डीआईजी इम्लीसँग भोज र गफमा मस्त थिए । आईजीपी अर्याल पुगेपछि त्यहाँको रौनक नै फेरिएको थियो । अर्याल करिव एक घण्टा विताएर त्यहाँबाट फर्केका थिए । केही महिना पहिले एसएसपी खरेलले अन्र्तवाताका क्रममा एक टेलिभिजनमार्फत डीआईजी शर्मा राम्रा प्रहरी अधिकृत भएको बताएका थिए । तीनै ब्यक्ति एसएसपी खरेलको छानविन टोलीका संयोजक बन्नु र एउटै भोजमा उनीहरु देखिनुलाई ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्न सकिन्छ । मल्होत्रा जस्ता काला ब्यापारी, विवादास्पद नेता अम्रेशकुमार र भारतीय प्रहरीका पूर्व डीआईजी इम्लीसँग भेट्नुलाई एसएसपी खरेलको कनेक्सन कहाँसम्म छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । कतै एसएसपी खरेलको सम्वन्ध ‘रअ’ सँग त छैन ? नत्र गोत्य रात्रीभोज र वार्तामा भारतीय डीआईजी इम्ली र ‘रअ’ का नेपाल एजेन्टसँग एसएसपी खरेल किन ?